Aragtida Wargeyska Kasmo ee Doorashada Hoggaamiyaha – Kasmo Newspaper
Aragtida Wargeyska Kasmo ee Doorashada Hoggaamiyaha
Updated - December 27, 2016 1:25 pm GMT
Soomaaliya iyo Baarlamaanka 10aad
Iyadoo dib loo dhigay waqtiyo badan, ugu dambeys, wixii loogu yeeray “Doorasho dadban” waxay u dhowdahay gabagabo, waxaana maanta 27 December la dhaariyey, intii badnayd, xildhibaanada Aqallada Hoose iyo Sare.
Waxay sagoontiyeen 2016, iyadoo hawlo badani horyaallaan; ay ugu muhiimsan tahay tan doorashada Madaxweynaha. Jagadaas nuurisada loo saaray dad badan; u sharraxan yihiin!
Hase ahaatee, qaab kasta ha ku yimaadeene, ragga iyo gabdhaha loo dhaariyey xubinnimada Aqallada Baarlamaanka, waxay magaca Ilaahay ku qaadeen in ay shacabka oo idil wakiil ka yihiin, xilkooda si daacad ah u gudan doonaan.
Waxaa la dhaariyey iyadoo uusan dalku Madaxweyne lahayn, laga soo bilaabo 9kii September 2016. Xilligaas oo ay ku ekayd 4tii sano ee loo doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kaas oo hadda qaab jacbur ah, obosiibo (abusive) isaga sii fadhiyey xafiiska Madaxweynaha, waxaana, iyadoo lagu xad-gudbay jiritaanka hey’adihii Dastuuriga ahaa, dalka maamulanayey wax loogu yeeray ‘Madal Qaran’ oo ay xubno ka noqdeen Guddoomiyihii Baarlamaanka, Madaxweynihii iyo Ra’iisal Wasaarihiisii.
Baarlamaankan cusub wuxuu hawl bilaabay iyadoo dhibaato weyni taagan tahay, oo niyad-jab baaxad lihi jiro, gaar ahaan sidii dalku u heli lahaa hoggaamiye xilkas ah, hufan, karti leh, daacad ah, ilaalinaya masuuliyadda iyo xushmadda lagu huwiyey magaca ummadda Soomaaliyeed iyo gobonimadeeda qarameed.
Arrintani waa culeys weyn oo horyaal dalka, oo haddii uu soo bixi waayo hoggaamiyahaasi; markaas ay Soomaaliya mudan karto mashaqo hor leh. Waxaa lagu guuldarraysan doonaa mar kale, Higsiga 2020 iyo in ay dalka ka dhacdo doorasho Hal-cod, Hal-qof.
Waayo, hawshii la qaban lahaa 4tii sano ee hore, dhinaca walba, waa lagu fashilay, waxaana afarta sano ee soo socota loo baahanayaa in la qabto 8-sano shaqadood; ay ka mid tahay in dalka oo dhan laga xoreeyo Al-shabaab; in amniga iyo kala dambeynta la sugo; in Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika dib ugu noqdaan guryahoodii; ciidan Soomaaliyeed la wareego kaalintoodii; in Afti dadweyne lagu ansixiyo Dastuurka KMG ah …
Wargeyska Kasmo waa dareensan yahay, oo u muuqataa culeyska uu Baarlamaanka 10aad ka mudan doono doorashada hoggaamiye xilkaas qaadi kara, waxayna dhibaato weyn kala kulmi doonaan:-
Jeeb hoos ka furan “xildhibaanada qaarkood”
Musharraxiin ku cusub siyaasadda, oo aan lahayn (Track record)
Hase ahaatee, dhinaca kale marka la fiiriyo, waxay haystaan fursad ka wanaagsan tii ay haysteen baarlamaannadii iyaga ka horreeyey. Waxay hastaan, dibna u milicsan karaan waayo-aragnimadii baarlamaannadaas, iyo gaar ahaan Baarlamaankii 9aad ee hadda waqtigiisu dhammaaday. Waxaa kaloo nool hoggaankii dalka mudadaas soo maamulay, iyo fool xumooyinkii dhacay iyo xad-gudubyadii loo geystay nidaamka dawladnimo: Musuq-maasuq iyo ku xad-gudubka Dastuurka KMG ah ee dalka. Waxay kaloo xogogaal u yihiin ku tagri-falkii awoodaha, xag dhaqaale iyo siyaasad iyo maamulba.
Iyadoo cashar laga qaadanayo wixii soo dhacay, waa in la sugo qofka imaanaya Jagada Madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo la marsiinayo laba heer oo isbuuxinaya:-
I. Shuruudaha musharrax Madaxweyne (Presidential candidate vetting)
Iyadoo la sii kaabayo qodobka 88aad ee Dastuurka KMG h, waa in uusan musharraxna u gudbin tartanka doorashada; isagoo aan la xaqiijin:
Sugnaan buuxda ee caafimaadka musharraxa
Sugnaan buuxda ee heerkiisa aqoonta iyo waayo-aragnimadiisa
Sugnaan buuxda in uusan qayb ka qaadan dagaalladii sokeeye
Sugnaan buuxda in uusan koox gaar ah ka mid ahayn
Sugnaan buuxda in uusan camiil shisheeye ahayn
Sugnaan buuxda in aan hore loogu soo eedayn khiyaano Qaran
Hadduu madaxtinimo soo maray, in aan lagu aqoon musuq-maasuq
Caddayn sugan, in masharrax walba iska soo casilay, haddii uu hayey/haysey xil kale.
II. Anshaxaha Doorashada Madaxweyne
Marka qodobada sare laga dhabeeyo, waxaa imaanaysa in la dejiyo anshax doorasho Madaxweyne. Waayo, haddii anshax doorasho xubin mudane Baarlamaan ay jirtay, oo qaarkoodna sidaas ku waayeen doorashadii Dadbanayd, muxuu noqonayaa anshaxa loo marayo doorashada qofka masuuliyadda iyo xushmada Qaranka Soomaaliyeed la huwinayo?
Shaki kuma jiro in ay tahay mid culus, waxaana lama huraan ah in la xaqiijiyo shuruudaha Anshax ee soo socda:-
Qofna xilka Madaxweynaha JFS kuma imaan karo cod uu iibsaday
Waa dambi Qaran, waxayna leedahay ciqaab iyo cawaaqib xun
Waxaa lagu waayayaa musharraxnimada (Disqualification of candidacy) lacag-cod
Xeer Ilaalinta Qaranka iyo Hanti-dhawarka Guud oo hawlgelaya, Hey’adaha Aminga iyo Amisom
Laga bilaabo maalinnta la doorto Guddoonka Baarlamaanka, waxaa si KMG ah xilka Madaxweynaha u sii qabanaya Guddoomiyaha Baarlamaanka muddo 30 casho ah, oo lagu dooranayo Madaxweyne.
Baarlamaanka ayaa oggolaanaya “Anshaxa Doorashada”, waxaana dhaqan-gelinaya Guddiga Baarlamaanka u xilsaaran doorashada.
Dawladnimo Soomaaliyeed waxay hadda magan u tahay labada Aqal ee la dhaariyey maanta, 27kii December 2016, taariikhduna waxay ku xukumi doontaa halka ay dhigaan dalka, doorashada hoggaamiyaha Qaran ee dhici doonta toddobaadyada soo socda.